Trump oo booqday dabka ugu khasaaraha badnaa taariikhda ee California – Radio Daljir
Noofember 18, 2018 5:13 b 0
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trumo ayaa gaaray gobolka California oo uu ka dhacay dabkii ugu khasaaraha badnaa ee taariikhda Mareykanka, kadib kaymaha gubtay.
Dabka ayaa dilay 76 qof, waxaana lagu la’ yahay inka badan kun iyo laba boqol oo qof, inkastoo ay saraakiisha ay sheegeen tiradaasi inay ka badantahay.
Isagoo ka hadlayay shir jaraa’id magaalada Paradise ayuu Trump ku sheegay inuu aad uga xunyahay waxa uu arkayo, waxaan uu eedda dusha u saaray inay aad u liidato habka maamulka kaymaha taasi oo uu sabab uga dhigay dabka khasaaraha gaystay.
“Waa inaynu qaadnaa talaabo haboon oo aan ku maamulayno, sidoo kallena waa inaan la shaqeeynaa kooxaha deegaanka” ayuu yiri Trump isagoo sheegay inuu filayo mar kalle inay soo laaban doonin musiibadan oo kalle.
Khubarada ayaa farta ku fiiqaya cimilada oo xun, isbadalka cimilada iyo dadka soo kodrhaya ay sabab u yihiin dabka kaymaha.